China 8oz 250ml amba karama na nwa anaghị agba nchara foaming pump pump Manufacture and Factory | Mgbapu
Ejiri karama amiri anyị nke 500ml nwere ụdị ụlọ ọrụ 304 igwe anaghị agba nchara / ncha ncha, na-eweta oge na oge adịghị mma n'ụlọ gị. Ezigbo n'akụkụ ụlọ ịsa ahụ ma ọ bụ kichin. Ugboro ugboro iji belata mkpofu kpatara nkwakọ ngwaahịa.
Ihe a na - eweghachi aka na ntanetị na - enye ọnụọgụ eco-friendly nke jikọtara atụmatụ mara mma yana arụmọrụ.
Ọ na-mere na China na recyclable amba iko na nchara na-àmà igwe anaghị agba nchara mgbapụta. Enwere ike iji igwe eji ihe ọ bụla eme ihe ọ bụla masịrị gị ma belata mkpofu plastik na afọ ole na ole sochirinụ.
Maka ndị chọrọ itinye ụdị n'ụgbọ mmiri ha, ma ọ bụ ndị zụrụ ncha na igbe ncha / mejupụta, onye nkesa ahụ dị mma.
Emere site na nnukwu amba soda-lime iko.
Kwekọrọ n'Ozizi nke 45mm anyị.
Nnukwu karama ike dị.
Nke gara aga: 0.5oz 1oz 2oz 4oz cobalt acha anụnụ anụnụ boston gbara gburugburu karama na nwa plastic alụlụ atomizer ịgba
Osote: 355ml 12oz doro anya karama aka ncha kalama na matte nwa igwe anaghị agba nchara ụfụfụ dispenser
16 Oz Amber Glass Karama na mgbapụta
Amber Fụfụfụ mgbapụta Karama
Apothecary Karama na mgbapụta
Apothecary mgbapụta karama
Black Glass mgbapụta karama
Clear Glass mgbapụta karama
Glass karama na mgbapụta Top
Glass ụfụfụ mgbapụta Bottle
Glass mgbapụta karama N'ogbe
Nnukwu karama iko karama
Obere Glass mgbapụta Bottle
16oz doro anya boston gburugburu mgbapụta karama na plasti ...
8oz 16oz Matte nwa mmiri mmiri ncha dispenser glas ...
16oz 500ml ọcha na agba boston gburugburu iko liqui ...
355ml 12oz doro anya iko aka ncha kalama na ma ...
8oz amba Boston gburugburu iko efere ncha kalama w ...
400ml iko aka ncha kalama na igwe anaghị ste ...
Iko karama na ịgba nfuli, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu, Clear Glass mgbapụta karama, Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Glass kalama na mgbapụta Dispenser,